समाचार - विचार
एमालेसहितका विपक्षी दलको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, विपक्षीहरुको यस्तो निर्णयले सत्तपक्षका नेताहरु भित्रभित्रै खुशी देखिएका छन् । सत्तापक्षको विश्लेषण यो छ कि
हरेक पेशाको बराबर महत्व हुन्छ । तर पारिश्रमिक भनेको कामको प्रकृती हेरेर नै हुने गर्छ। एउटै खेलमा पनि कुनै खेलाडीलाई अरुभन्दा कैयौ गुणा धेरै पारिश्रमिक मिल्छ किनकि उसले त्यहि समयमा अरुले गर्न नसक्ने काम गरेर देखाउछ । अब आउनुस एउटा चिकित्सकक
म र मेरा मित्र कसैले पनि पाइला टेक्नु नपरोस् भन्ने गरिएका दुई ‘अ’ बाट सुरु हुने ठाउँमा जागिर गर्दछौं । म अस्पताल र उनी अदालतमा । बेलाबखतमा हामी मित्रताका कुरा सँगसँगै देश विदेश र आ–आप्mना कार्यक्षेत्रका घटनाक्रमलाई लिएर बादविवाद गर्दछौं ।
कुनै पनि संगठनमा सबै काम सुझबुझ अनुसार हुँदैन । झन् सशस्त्र क्रान्तिको समयमा त कतिपय कुराको तारतम्य मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गर्दा पनि केही यस्ता घटना भए । राम्रो योजना र सूचना बेगर भएको आक्रमणले पार्टीलाई धेरै नोक्सान
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८८ मा गरेको घोषणा अनुसार प्रत्येक बर्ष डिसेम्बर १ मा एड्स दिवस मनाईन्छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै एड्स भएका मानिसहरू अफ्रिकामा बसोबास गर्छन र एड्सबाट मृत्यु हुने बालबालिकाहरु धेरै जसो अफ्रिकामा बस्छन् ।धेरै यस्ता
निर्माणात्मक परीक्षाहरु सिद्धान्तत अनौपचारिक हुन्छन् । यस्ता परीक्षा शिक्षकले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि लिन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीको सिकाइलाई सहयोग गर्न, उनीहरुका समस्या पत्ता लगाउन, व्यक्तिगत रुपमा समस्या समाधानका लागि सहयोग
जगत जननी माता जानकीको जन्म थलो मा दिन प्रतिदिन लामखुट्टे बढ्दै गइरहे को छ । हामी आफनो घर, वरिपरिको सडक, नाला सफाई स्वयंले र घरको फोहरको व्यवस्थापन पनि स्वयंले नै गर्नुपर्छ । नगरवासी स्वयंले कम्तिमा आ–आफना घर र वरिपरिको सडक नाला सफा नगरे
विश्वभर वर्षेनी ५ वर्षमुनिका १६ लाख बालबालिकाको मृत्यु निमोनियाले गर्दा हुन्छ । नेपालमा ५ वर्ष मुनिका ३५ लाख वच्चाहरु मध्ये ५६ सय जनाको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुनेहरु मध्ये ९८% बालबालिकाहरु नेपाल जस्तो कम विकासोन्मुख देशका पर्दछन्। आँखाले
सर्वप्रथम त बाल भन्नाले निकै सानो उमेरका केटाकेटी र अधिकार भन्नाले कानुनी,परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्त न्यायोचित दावी वा हक हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार अनुकुल वातावरण आदि उसका नैसर्गिक अधिकार हुन् । हाम्रो वाल्य अवस्थामै बाबु
थाइल्याण्डका वृद्ध नरेश भूमिबल अदुल्यादेजको ढिलो वा चाँडो निधन हुन्छ नै भन्ने अड्कल वर्षौं अघिदेखि गरिएको थियो । तर उहाँको, एक प्रकारले भनौ, असामयिक निधनले उत्पन्न गरेको पीडाले थाइल्याण्डलाई सोचे भन्दा बढी नै शोकमग्न तुल्याएको छ । करिब
नेपालको तीन तिर सीमा जोडिएको र खुल्ला सीमा रहेको सबै भन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत संगको नेपाल सम्बन्ध सधैं चर्चामा रहुन्छ । नेपाल र नेपालीका लागि देशभक्ति समेत मापन गर्ने यो सम्बन्ध बिगत १ बर्ष अघि देखि तनावका बिच गुज्रदै गएको समयमा नेपालका
एमाले ले अरुण तेश्रो रद्द नगराएको भए नेपाल आज झिलीमिली हुने थियो , नेपाली जनता ले लोडसेडिङ झेल्नु पर्ने थिएँन , बिधुतिय अभावका कारण थुप्रो उघोगहरु बन्द हुने थिएनन , थुप्रै नयाँ उघोगहरु खुल्ने थिए , हजारौ ले रोजगार पाउने थिए तर बिडम्बना
राजनिती भनेको बिचार हो , आमाको पेटबाट निस्कदै कोही पनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर निस्कदैन ! पार्टीले बोकेको निती , सिद्धान्त र योजना हेरेर , बुझेर नै कुनै पार्टीको पछी लागिन्छ! आमाले हिडन र बोल्न सिकाईन बाबुले संघर्ष गर्न सिकाए बिदेशी